Sharci lid ku ah qorshaha Obama ee socdaalka oo la meelmariyay - Wargane News
Home Somali News Sharci lid ku ah qorshaha Obama ee socdaalka oo la meelmariyay
Golaha wakiilada Mareykanka ayaa meel mariyay sharci hagal daacin doono hannaanka socdaalka ee madaxweyne Obama uu dhawaan ku dhawaaqay.
Hindise-sharciyeedkan ayaa waxbo kama jiraan ka dhigaya amarka madaxweyne Obama ee sida ku meel gaarka ah loogu ogolaanaya in ay dalka ku sii noolaadaan oo aan la musaafurinin ku dhawaad afar milyan oo qof oo sharci la’aan ku jooga dalka mareykanka.
Sharcigaasi ayaa wali u baahan in la hor geeyo aqalka senate-ka si loo ansixiyo, waxaana durbaba uu aqalka cad ee mareykanka ku hanjabay in uu codka diidmada qayaxan kala hor tagi doono hindise-sharciyeedkaasi.
Balse tallaabadaasi ay qaadeen xildhibaanada jamhuuriga ayaa wali ah mid wax ku ool ah maadaamaa ay muujinayso sida ay uga go’antahay in ay ku gacan seyraan amarka ka soo baxaya madaxweyne Obama.
Waxa ayna rumeysan yihiin in madaxweynuhu uu ku tagri falay awooddiisa kaddib markii uu bishii November ee sanadkii tegay uu ku dhawaaqay isbadal dhanka hannaanka socdaalka dalkaasi.